नोभेम्बर 13, 2018 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक5Comments डा. राम बहादुर बोहरा, बुढो
फ्रेवुअरी 18, 2019 फ्रेवुअरी 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
5 thoughts on “चाँडो बुढो हुन नपरोस् भन्नका लागी ध्यान दिनुपर्ने सुत्रहरु”
Pingback: थाहा पाउनहोस् शरीरमा प्रोटिन कम हुँदा के के हुन्छ ?
Pingback: थाहा पाउनुहोस र सिकेर गर्नुहोस गर्दन दुख्दा गर्नुपर्ने व्यायामहरु
Pingback: जान्नुहोस् ! शारीरिक व्यायाम के, किन र कसरी ?
Pingback: लामो आयु बाँच्न के गर्नुपर्ला ?
Pingback: यस्ता छन् लामो आयु बाँच्ने १५ उपायहरु, जानी राखौ